Mboro yainge yazvimba musoro uchipenya apa beche rainge ranunira nekuda kusvirwa! - Masasi eHarare
DzeBonde Mboro yainge yazvimba musoro uchipenya apa beche rainge ranunira nekuda kusvirwa!
Mboro yainge yazvimba musoro uchipenya apa beche rainge ranunira nekuda kusvirwa!
Mboro yainge yazvimba musoro uchipenya apa beche rainge ranunira nekuda kusvirwa! Masvirirwo andakaitwa nerimwe Hure rekumaAvenues muHarare handife nakamakanganwa masasi.
Ndainge ndambobuda muZim ndokunogara kuJoburg for a year ndichishanda ku Nandos, mari yangu yese ndaichengeta coz hapana responsibility yandainge ndinayo rent ndainge ndisingabhadhare ndaigara ne sister yangu. Nguva yangu yekudzoka yakakwana ndokubva ndazvitengera my first cellphone yainge iri Samsung S4, ndokupinda mubhazi.
Ndainge ndiri munhu anoda ma gadgets zvekuti I even bought a Samsung tablet as well kuti ndiwone movie mubhazi, ndakabva ndagara nerimwe babe rainge rakatsvuka zvidya zvese zvekuti chainge chava mupfungwa kuti dai ndikatanga kumubata Bata. Handina kuziva kuti Grace aitova hure nekunaka kwainge akati she was friendly zvekuti muroad yese ndainge ndakutomutengera chikafu aah masasi babe rainge rakanaka iroro.
Takapfuura border ndikanzwa munhu akuti saka unogara kupi ndichibva ndamuudza kuti kuGreendale apa munhu ayinge akutonakirwa neni, akatora kablanket kake ndokubva andifugidza makumbo ndoisa ruoko rwake pasi peblanket ndokuvhura zip yangu achibva atanga kubonyora mboro yangu. Ayiratidza kuti anoziva zvaaiyita ndipo pandikatanga kubata beche rake ndinzwe rainge ratota zvekuti apa munhu aingoisa perfume apa ayida kuvhura smell yebeche kuti vanhu vasazive zvaiyitika.
Bhazi rakarohwa inini ndainge ndakungoda kuti tisvike nekuti zvainge zvanyanya ndainge ndakuda kusvira chete apa iye akazviwona ndokubva ayita kunge munhu arikuda kurara achibva afuga musoro neblanket riya ndokubva atanga kundiyamwa mboro, hazvina kana kutora nguva kuti nditunde achibva amedza huronyo hwese mubhazi imomo, akamuka achibva ati inini ndogara close to Roadport hawudi here kuyenda neni. Ndakangoti haaa Grace unenge wapinda mubrain dzangu was gonna ask kuti toyenda kupi kunopedzisa zvawatanga izvi.
Takazosara kusvika paRoadport takudana, ndakazoti ndavharirwa mumba make iwe masasi handisati ndasvirwa sezvandikaitwa izvi, zviya zvekunzi hure harinzwe mafeelings kunyepa anenge asati abatwa panonaka. Takatanga kubatana kusvikira tese tavhukirwa mboro yainge yaita kuzvimba musoro apa uchipenya kunge waiswa polish.Grace beche rake rainge raita kuzvimba nenyere apa achitadza kuita anything akabva akwira pamusoro pangu ndokuita mboro yekugarira apa akangosimudza kadress kake ndokubairira zimboro rangu masasi ndakachemerera ndichinzwa kunakirwa nebeche, masvirirwo acho ndeaye akuti magwana unodzoka chete. These handina mumwe wandinosvira kunze kwake Grace, beche rake rinogara rakanunira apa handibhadhare ndakusvirwa mahara.
Mboro yainge yazvimba musoro